CIA VS. CPA - Iza no tsara Certification? [It's a Close Call]
CIA vs CPA: Certification Iza no tsara ho anareo:?
23 Aug CIA vs CPA: Certification Iza no tsara ho anareo:?
Posted at 22:50h in Alternate Articles ny Bryce Welker, CPA 1 Comment
Tena sarotra ny hamaly fanontaniana: Tokony ho Anatiny voamarina Auditor (CIA) na voamarina Public kaonty (CPA)? Samy efa matihanina hajaina alalana amin'ny Asa fa manatsara ny fahaiza-manao sy hampandrosoana ny asa, Ahoana anefa no misafidy? Aoka isika hanomboka amin'ny fandravana izay nidina tsirairay dia hitaky fanomezan-dalana eo amin'ny lafiny fotoana fanoloran-tena, ezaka, sy ny vola lany.
Inona no atao hoe CIA?
CIA vs CPA: karama
Voamarina kaonty-bahoaka no antenaina mba hanatanteraka ny asany-pahamendrehana. Nahoana? Satria izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanaovana asa mifandray amin'ny fitantanam-bola sy ny ara-bola-bahoaka tatitra, toy ny fanomanana ara-bola fanambarana, hetra fanomanana, sy ny firaketana an-tsoratra izay rehetra mitandrina-araka voatendry fitsipi-fitsipika. CPAs dia ny vahoaka ihany no ara-dalàna navela hanao sonia sy hanaiky ara-bola fanambarana ny IRS. Mba ho CPA dia tsy maintsy mandalo fanadinana ny CPA malaza izay angoninay ny AICPA. Izany dia ahitana 4 faritra: Accounting sy ny Tatitry, Business Tontolo iainana sy hevitra, Financial Accounting Reporting, and Regulation.
Mba ho CPA dia tsy maintsy mandalo fanadinana ny CPA malaza izay angoninay ny AICPA
Pahaizana ara-panjakana saika mifantoka fotsiny amin'ny manao fanaraha-maso anatiny ny orinasa sy ny anatiny ny volan'izy ireo mpitandrina. CIAs atao koa ny manao fanaraha-maso ny rafitra vaovao, fanajana sy ny fototra anatiny protocols. Izany no anjara asa izay mitaky anao lalandava sy hanaraka fitsipika etika ambony. Toy ny CPA, mba ho tonga CIA dia tsy maintsy mandalo fanadinana. Ny CIA fanadinana angoninay ny Institute of ara-panjakana (IIA) ary ahitana ny 3 faritra: Business Knowledge for anatiny bolan'ny, Fampiharana ny anatiny bolan'ny, ary hanara-maso akaiky Ireo Fototry ny anatiny. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny CIA tsara indrindra Prep taranja Eto.
Mba ho CIA, tsy maintsy mahafeno ireo fepetra takiana manaraka ireto:
Efa nahazo efa-taona faharoa taorian'ny mari-pahaizana avy any amin'ny oniversite ofisialy. (Azo hosoloina traikefa amin'ny asa; na dimy taona ny asa traikefa miaraka roa taona faharoa taorian'ny fianarana, na fito taona asa fanaraha voamarina.)
Roa taona ny asa fanaraha-maso voamarina traikefa (ny mari-pahaizana maîtrise dia afaka hisolo ny herintaona)
Mizara ny 3 fizarana CIA Exam
Aloavy fampiharana rehetra azo ampiharina sy ny saram fanadinana
Manaiky ny Character Reference Form nosoniavin'ny ny CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, na ny mpanara-maso ny asa
Mifanaraka hitoetra amin'ny IIA ny Code ny Fitsipi-pitondran
Omeo porofo ny famantarana
Ny fotoana takiana mba ho lasa miovaova ny CIA indrindra, mifototra amin'ny safidy maro noho izy ireo ny fampianarana / asa traikefa takiana. Dia mila 4 taona tany amin'ny oniversite mba hahazoana ny maripahaizana. Avy eo dia mila 2 taona ny asa nekena traikefa, izay mitondra ny tanteraka ho 6 taona. IIA mamela 4 taona tanteraka ny fanadinana (izay koa dia tena ambany dia ambany ny tahan'ny mandalo), ka dia afaka maka anao 10 taona mba ho voamarina. Ho tonga ny CPA, tsy maintsy mahafeno ireo fepetra takiana manaraka ireto:
Hihaona ny fanabeazana sy ny traikefa takiana ny U.S. toetra izay halehanao ho fahazoan-dalana. Ireo no mitovy amin'ny fanjakana ny fanjakana, fa amin'ny ankapobeny ny zavatra takiana mba hanontany anareo, fara fahakeliny, ny efa-taona ao amin'ny fitantanam-bola ambaratonga, raharaham-barotra na ny mifandraika saha ary roa taona ny asa fitantanam-bola ankapobeny
Mandehana fizarana efatra-CPA Exam
I mafy Manentana anareo aho mba hanadihady ny fepetra takiana akaiky ny fanjakana eo anatrehan'i mibanjina ny CPA dia. TSY toy CIAs, ny firenena izay voamarina, CPAs dia tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana ho an'ny isan-toetra izay mampihatra. Ho mandany manodidina 5 taona nahazo ny mari-pahaizana licence sy / na ny mari-pahaizana maîtrise mba hahatanteraka ny 150 bola ora takina mba ho tonga CPA. Raha ny toetrareo asa mitaky traikefa, dia hametraka iray hafa 2 taona. The AICPA mamela 18 volana mba mizara ny CPA fanadinana. Izay rehetra manampy ho amin'ny 8 ½ taona.
Ny CIA Exam dia 100% compute-monina ary ahitana ny ampahany telo samihafa:
Fizarana 1: Hanaraha-maso anaty Basics
Fizarana 2: Fanaraha-maso anatiny Practice
Fizarana 3: Fanaraha-maso anatiny Knowledge Elements
Azonao atao ny maka ny CIA fanadinana na oviana na oviana nandritra ny taona na oviana na iray amin'ireo 500+ Pearson Vue mifantoka manerana izao tontolo izao. Ny fanadinana dia atolotra amin'ny 16 fiteny, anisan'izany ny Arabo, Sinoa (nentim-paharazana), anglisy, frantsay, alemaina, hebreo, indonezianina, Italiana, Anarana, Koreana, poloney, portogey, Rosiana, Espaniola, Tiorka, ary Thai. Raha toa ianao ka iray IIA mpikambana, ny vola lany ny mandinika dia $990. Non-mpikambana tsy maintsy mandoa ny vidiny feno amin'ny $1,150, izay no antony tsy hanenenana ny fotoana mba ho lasa mpikambana IIA. Ny CPA Exam no mandrafitra ny fizarana efatra:
Fanaraha-maso sy ny teny vavolombelon'Andriamanitra (AUD)
Financial Accounting sy Tatitra (FAR)
Business Tontolo iainana sy hevitra (bec)
Tahaka ny CIA Exam, ny CPA Exam dia 100% solosaina monina. Na izany aza, izany ihany no itantanana Prometric Testing alalan'ny Foibe mandritra ny efa-bolana varavarankely roa nandritra ny taona. Ny fanadinana dia tsy natolotra tamin'ny volana Martsa, Jona, Septambra na Desambra. Ny vola lany ny CPA Exam miovaova amin'ny fanjakana / fahefana, fa amin'ny ankapobeny ny fiaretana $600 ny $800 ho an'ny rehetra ny fizarana efatra.
amin'ny ankapobeny, CPAs mahazo vola kely mihoatra noho ny CIAs, fa izao rehetra dia miankina amin'ny CIA ny asa lohateny. Anton-javatra hafa dia afaka mamaritra ny CIA na CPAs karama, toy ny toerana, lohateny, traikefa maro sy taona ela no hamaritra ny karama. Ny Median karama ho an'ny CPA dia $62,123 ary $59,677 fa ny CIA. Vao haingana no nahazoanay mainka fangatahana ho an'ny tightened andraikitra sy fanaraha-maso bebe kokoa., fanaovana asa fitomboana be fanantenana ho an'ny CIAs sy ny CPAs.
Mazava ho azy, rehetra izany dia miankina amin'ny zavatra tianao hatao. Ny CIA fanamarinana dia mora kokoa ny mahazo noho ny CPA satria ny fanadinana dia mifantoka amin'ny 1 lafiny lehibe ny fitantanam-bola, CPA kosa ny fanadinana dia mifototra amin'ny 4. Raha tianao tsipiriany ny asa sy ny fanadihadiana, ny CIA fanamarinana dia miasa avy tsara ho anareo. Etsy ankilany, ny CPA koa manao ny asa fanaraha fa manana fahafahana asa bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny hetra sy ny tatitra, famoronana zavatra maro kokoa fanomezan-dalana. Raha tianao fanaraha, hetra, tatitra sy fitsipika, CPA lalana dia ho tsara indrindra ho anao. Raha te-mpilalao kokoa ao amin'ny tontolo ara-bola, dia afaka mandeha ho an'ny! Manomboka ny CPA dia, tokony hanomboka amin'ny alalan'ny fikarohana izay Avereno dinihina Mazava ho azy fa tokony ampiasaina mba hianatra ho an'ny fanadinana. Izany no dingana lehibe voalohany! Ampitahao amin'ny CIA TOP FAMERENANA Courses
HAHITA NY TSARA INDRINDRA CPA FAMERENANA Course